ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Rubella vaccine) သည် ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်သာ ထိုးရသည်။ ထိုးပြီး ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ်အကြာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးသော လူပေါင်း(၉၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ခုခံအားများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းမြင့်မားသော နိုင်ငံများတွင် ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါနှင့် မွေးရာပါဂျာမန်ဝက်သက်လက္ခဏာစု (congenital rubella syndrome) ဖြစ်ပွားခြင်း လုံးဝမရှိတော့ပါ။ ကလေးသူငယ်ဘဝတွင် ဤကာကွယ်ဆေး အထိုးမခံခဲ့ရပါက ထိုကလေးများမှ မိန်းကလေးများကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့် ရင်သွေးငယ်သည် မွေးရာပါဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လူပေါင်း(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ကို ဤကာကွယ်ဆေးပေးထားရန်လိုအပ်သည်။
ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးများစာရင်းထဲတွင် ထည့်သွင်းထားရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ အကယ်၍ လူအားလုံးကို ဤကာကွယ်ဆေးမထိုးလျှင်တောင်မှ ကလေးမွေးဖွားနိုင်သောအရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးအားလုံးကို ထိုးပေးသင့်သည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများကို ဤကာကွယ်ဆေး မထိုးပေးသင့်ပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်သာ ထိုးခြင်းဖြင့် ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကို ဘဝတသက်တာ ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း တခါတရံတွင် နှစ်ကြိမ်ပေးကြသည်။
ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ပြင်းထန်လေ့မရှိပါ။ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ယားယံ၍အင်ပြင်ထွက်ခြင်း၊ ဆေးထိုးသောနေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းနှင့် နီရဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ဆေးထိုးပြီး ရက်သတ္တပတ်(၁-၃)ပတ်အကြာတွင် အဆစ်များနာကျဉ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ပြင်းထန်သော ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားလေ့မရှိပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို သီးသန့်ဆေး သို့မဟုတ် အခြားကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသောဆေးအနေဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ရောစပ်ထားသောဆေးများမှာ ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသော အမ်အမ်အာ(MMR)၊ ဂျိုက်သိုး၊ ဝက်သက်နှင့် ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသော အမ်အမ်အာဗွီ(MMRV)ဆေးတို့ဖြစ်သည်။
ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၆၉)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို (၂၀ဝ၉)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း(၁၃၀)ကျော်၌ ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးများထဲတွင် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် အမ်အမ်အာကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးကို လက်ကားဈေး (ဝ.၂၄) ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၅၀-၁၀ဝ) ဒေါ်လာအထိ ကုန်ကျနိုင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Rubella vaccines: WHO position paper." (15 July 2011). Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations 86 (29): 301–16. PMID 21766537.
↑ Atkinson၊ William (2011)။ Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (12 ed.)။ Public Health Foundation။ pp. 301–323။ ISBN 9780983263135။ Mar 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ Vaccine, Measles-Mumps-rubella။ 8 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 315။ ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=471202" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။